Knowledge Archives - Cele Zone
အဖြေမှန်ကိုသိရဖို့အတွက် စက္ကန့်(၃၀)လောက် အချိန်ပေးကြည့်ရမယ့် ဓာတ်ပုံများ
အခုဖော်ပြမယ့်ဓာတ်ပုံတွေကတော့ အလွန်ကို ထူးခြားပါတယ်။ ဘာလို့ဆို ဖြတ်ကနဲကြည့်လိုက်ရင် မတူညီတဲ့ ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကို ပေါင်းစပ်ထားတယ်လို့ ထင်ရစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်က ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတည်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာဆရာတွေအဖို့ ဒီလိုဓာတ်ပုံတွေရဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ သဘာဝတရားကြီးရဲ့ ဖေးမကူညီမှုတွေလည်း လိုပါတယ်။ ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. …
ခေတ်လွန်ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ ဖန်တီးထားကြတဲ့ ထူးခြားတဲ့အရာ (၁၄)ခု
အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကို ပြုလုပ်တဲ့အခါ ဒီဇိုင်နာတွေဟာ ပို၍သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေဖိုနဲ့ ပိုပြီးအသုံးဝင်စေဖို့ ရည်ရွယ်ကာပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။တစ်ခါတစ်ရံဒီဇိုင်နာတွေဖန်တီးထားကြတဲ့စိတ်ကူး တွေဟာအရမ်းကိုမိုက်လွန်းတဲ့ရလာဒ်တစ်ခုအနေနဲ့ထွက်ပေါ်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ စိတ်ကူးတွေဟာဘယ်တော့မှကုန်ဆုံးမှာမဟုတ်သလို ကမ္ဘာကြီးဟာ၍ နေစရာနေရာတစ်ခုထက်ပိုတယ်ဆိုတာကိုလည်း သက်သေပြနေကြဦးမှာပါ။(၁)အပင်ငယ်လေးတွေပါဝင်သော အများပြည်သူသုံးခုံတန်းရှည် (၂)ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးပြုသော ဝိုင်ဖိုင်ဟော့စပေါ့တစ်ခု (၃)ရာသီအလိုက်ပုံစံပြောင်းနိုင်မယ့်ရောင်ပြန်ခြံစည်းရိုးတစ်ခု (၄)ပန်းခြံထဲကစက်ဘီးလမ်းကြောင်းတစ်ခု (၅)ရေစိုနေတဲ့နေရာတွေကိုအလွယ်တစ်ကူလှည့်ကာထိုင်နိုင်တဲ့ ခုံတန်းရှည် (၆)မိုးခိုတဲ့နေရာ၊လှေကားကဝှီးချဲတက်လမ်းနဲ့ခုံတန်းရှည်တွေရဲ့ဒီဇိုင်းအလန်းများ (၇)စားပွဲပါထည့်ထားပေးတဲ့ခုံတန်းရှည် (၈)ကျူးလစ်ပန်းနဲ့တူပြီးခေါက်ထားလို့ရတဲ့ထိုင်ခုံ (၉)အများပြည်သူအသုံးပြုနိုင်တဲ့ ကြိုးပုခက်ဒီဇိုင်းများ (၁၀)ဒန်းစီးလို့ရတဲ့ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင် (၁၁)အများပြည်သူသုံးဖုန်းအားသွင်းလို့ရတဲ့နေရာ (၁၂)သစ်ပင်ကိုမထိခိုက်စေဘဲတည်ဆောက်ထားတဲ့ခုံဒီဇိုင်း (၁၃)ရေငွေ့ပျံခြင်းနဲ့ရေညစ်ညမ်းခြင်းကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်နိုင်ဖို့ ပလပ်စတစ်အရိပ်ဘောလုံးလေးတွေကိုရေလှောင်ကန်အတွင်းပစ်ချနေပုံ (၁၄)ဓာတ်လှေကားမှာတွေ့ရတဲ့ကြော်ဌာဒီဇိုင်းတစ်ခု
သောတာပန်ဆိုတာ လောဘလည်း ဖြစ်သေးတယ်၊ ဒေါသလည်း ဖြစ်သေးတယ်၊ မောဟလည်း ဖြစ်သေးတယ်၊ ထိနမိဒ္ဓ ငိုက်မျည်းစိတ်တွေလည်း ဖြစ်သေးတယ်၊ ဥဒ္ဓစ္စ ပျံ့လွင့်မှုတွေလည်း ဖြစ်သေးတယ်။ ကုက္ကုစ္စလည်း ဖြစ်သေးတယ်။ ပုထုဇဉ်နဲ့ မခြားဘဲ ဒီသဘောတွေ ဖြစ်သေးတယ်။ ပုထုဇဉ်နဲ့ ဖြစ်ပျက်ပုံ တူနေပေမယ့် ဘာတွေကွာသလဲဆိုတော့ ပုထုဇဉ်က ဖြစ်ကြောရှည်ပြီး သောတာပန် အရိယာတည်ပြီးသူက ဖြစ်ကြော မရှည်ဘူး ဖြစ်ကြော …
အရိမေတ္တေယျ ဘုရား ရှင် အားဖူးတွေ့လိုလျှင် ဒီကုသိုလ် (၁၀) မျိုး မဖြစ်မနေ လုပ် ပါ
၁။ မိမိကိုယ်တိုင် သာသနာ့ဝန်ထမ်း ရှင်ရဟန်း ပြုလုပ်ပါ။ ၂။ ကိုယ်၏ရင်သွေး ဖြစ်စေ သူတပါးတို့၏ရင်သွေးဖြစ်စေ ရှစ်ဖြာပရိက္ခရာစုံလင်စွာဖြင့် သာသနာ့ဘောင် သို့ သွပ်သွင်း ချိးမြှောက်ပါ။ ၃။ သရဏဂုံ သုံးပါးနှင့် ငါးပါးသီလကို လုံခြုံ အောင်စောင့်ထိန်းပါ။ ၄။ ဗောဓိညောင်ပင်စိုက်ပျိုးလှူဒါန်းပြီး ညောင်ရေ သွန်းလောင်းပါ။ ၅။ စေတီ ဇရပ်များ တည်ဆောက်လှူဒါန်းပါ။ ၆။ မိဘနှစ်ပါးကို …
သင့်ကို ပြုံးမိသွားစေမယ့် ကတ်သီးကတ်သတ် ဗဟုသုတမှတ်စုတိုများ
အခု ဖော်ပြချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ် သိထား၊ ကြားထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ ကတ်သီးကတ်သတ် ဗဟုသုတ မှတ်စုတိုများလို့ အမည်ပေးထားပြီး၊ တချို့သောအကြောင်းအရာတွေကတော့ သင့်ကို ပြုံးမိစေမယ်လို့ ယုံကြည်ရပါတယ်။ ကဲ ဘယ်အချက်တွေက ကတ်သီးကတ်သတ်ဖြစ်မလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။ (၁) တောက်တဲ့တွေဟာ မနက်ခင်းပိုင်း နှင်းရည်တွေကိုသောက်ဖို့ သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကို လျှာနဲ့လျက်ရပါတယ်တဲ့။ သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေပေါ်ကို ကျရောက်နေတဲ့ နှင်းရည်တွေကို …
ဝေးလံလှတဲ့ နေရာတွေမှာတစ်လုံးတည်း သီးသန့်တည်ဆောက်ထားတဲ့ ထူးခြားတဲ့အိမ်များ
နယူးယောက်မြို့နှင့် တိုကျိုမြို့တို့ကဲ့သို့ မြေအောက်မီးရထားစနစ်ရှိကာ ဖွံ့ဖြိုးပြီးအချက်အချာကျသော မြို့ကြီးများတွင်နေထိုင်ပါက အကျိုးရှိမှာအမှန်ပါပဲ။ ယဉ်ကျေးမှုတွေ စွမ်းအင်တွေ စဉ်ဆက်မပြတ်ရွေ့လျားမှု အပြည့်ရှိနေတဲ့ မြို့ပြပတ်၀န်းကျင်‌တွေမှာ နေထိုင်ရတာဟာ လူပေါင်းများစွာအတွက် အဆိပ်မိနေသကဲ့သို့ ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ သို့သော် လူနေမှုပုံစံတွေဟာ မတူညီကြပါဘူး။ ပတ်၀န်းကျင်တိတ်ဆိတ်ပြီး အေးချမ်းစွာအနားယူချင်လိုသော သူများအတွက် ပိုကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုရှိ‌နေသည်ဟု ယုံကြည်နေကြပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ သူတို့ဟာ အမြဲတမ်းနီးပါး ဈေးတက်လို့နေပါတယ်။ (၁) Iceland ပြည်နယ် …